AKHRISO: Magacyada Musharixiinta u taagan xilka Madaxweynaha Hirshabeelle……… - Hablaha Media Network
AKHRISO: Magacyada Musharixiinta u taagan xilka Madaxweynaha Hirshabeelle………
HMN:- Musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ololahooda ka bilaabay magaalada Jowhar ee xarunta maamulkaasi.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in musharixiinta xilka madaxweymnaha Hirshabeelle ay sare u dhaafeen lix musharax oo ka soo jeeda beesha Xawaadle, taasoo xaq u leh xilka madaxweynaha Hirshabeelle.
Musharixiinta ayaa buuxiyay shuruudaha ay u dhigeen guddiga doorashada madaxweynaha ee Baarlamaanka Hirshabeelle oo ay ka mid ahaayeen bixinta lacag dhan $10,000 (Toban kun oo doollar), taariikh nololeedka musharraxa, caddeymaha waxbarashada iyo khibradiisa.
Musharixiinta buuxiyay shuruudaha waxaa ka mida:
1- Cabdi Faarax Sharaawe (Laqanyo) – Guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan.
2- Maxamed Cabdi Waare – Musharax xilka madaxweyne kula tartamay Cali C/llaahi Cosoble.
3- Cabdikariin Cali Nuur – xildhibaan iyo wasiir ka tirsan Hirshabelle
4- Yuusuf Maxamuud Hagar (Dabageed) guddoomiyihii hore ee Gobolka Hiiraan iyo wasiir ka tirsan Hirshabelle
5- Cabdinaasir Shirwac Maxamed – Ganacsade
6- Maxamed Caruush Diirow – Agaasimihii wasaarada arrimaha gudaha Hir